Learning to write in English – Prof. Myo Kyaw Myint | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » Learning to write in English – Prof. Myo Kyaw Myint
Learning to write in English – Prof. Myo Kyaw Myint
Posted by kai on Dec 30, 2019 in Contributor, Columnist, Education, Literature/Books, Myanmar Gazette | 1 comment
ယခုလို နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကူးတဲ့ အချိန်ကာလမှာ သတင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ ဆောင်းပါးကို စတင်လိုပါတယ်။ အရင်လက Writing စာအုပ်လေးတွေ အကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီး Writing စာအုပ်လေးတွေ အခမဲ့ပို့ပေးဖို့ စာရေးသူထံ e-mail ပို့လာသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ e-mail ပို့လာသူအများထဲမှာ ပထမဆုံး ပို့လာသူ သုံးယောက် ဦးဝါဆို၊ ဦးချမ်းအေးနှင့် ဒေါ်မိမိသန်း တို့ကို Congratulations လုပ်သင့်ပါတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ် ဆီလည်း ပေးပို့လိုက်ပါသည်။ Christmas နဲ့ ကြုံနေတော့ အနည်းငယ်တော့ ကြာပါလိမ့်မယ်။ သည်းခံပြီး စောင့်ဆိုင်းကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Myanmar Gazette ရဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ အံသြ
စရာပါပဲ။ ကမ္ဘာအနှံမှာ ရှိတယ်လို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ e-mail ပို့လာသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်တင်ပါတယ်။ ပညာလိုလားတဲ့ စိတ်ထားလေးတွေကိုလဲ လေးစား မိပါတယ်။ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်။ ယခုလမှာ Argumentative essay လေးအကြောင်းတင်ပြမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ the Hague မှာ မြန်မာအစိုးရကို Gambia အစိုးရက ဦးစီးပြီး Rohingya လူမျိုးများကို Genocide ပြုလုပ်ပြီး သတ်ဖြတ်စော်ကားပါတယ်ဆိုပြီး တရားစွဲဆိုမှုနှင့် ကြုံလာပါတယ်။ဒီလိုတရားစွဲဆိုခြင်းကို ခုခံကာကွယ်ဖို့ မြန်မာအစိုးရကိုယ်စား နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ် တိုင်လာရောက်ပြီး ချေပစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် အစစအရာရာအနစ်နာခံပြီး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာ အားလုံးသိရှိကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ လျှောက်လဲချက်ကို သေသေချာချာနားထောင်ကြည့်ရင် argumentative essay ရေးသားတဲ့အခါ အထူးအရေးကြီးတဲ့ concession ဆိုတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးကို လှလှပပ ထိထိမိမိလေးသုံးပြီးလျှောက်လဲထားတာ တွေ့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ concede လုပ်ဆိုတာကတော့ တဖက်သားရဲ့ စွပ်စွဲချက် ပြောဆိုချက်ကို လုံးဝမှားယွင်းတယ်လို့ ငြင်းမဲ့အစား၊ မှန်သင့်သလောက် မှန်ကြောင်း ဝန်ခံခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီလို concede လုပ်ဖို့ သိပ်အရေးကြီး ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်နိုင်မှ မိမိရဲ့ လျှောက်လဲချက်၊ တုန့်ပြန်ပြောဆိုချက်တွေဟာ တဖက်စွန်းရောက်နေတဲ့ ၊ တနည်းအားဖြင့် extremist views တွေမဟုတ်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ argument ရေး သားတဲ့အခါမှာ မိမိရဲ့ ပြောဆိုချက်များဟာ အချက်အလက်ကျတဲ့၊ မှန်ကန်မှုမျာအပေါ် အခြေခံတဲ့လျှောက်လဲချက်များ၊ ပြောဆိုချက်များဖြစ်ကြောင်း အများက လက်ခံဖို့လိုပါတယ်။ သို့မှသာ မိမိရဲ့ argument က အနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု The Hague မှာ တင်ပြလာတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လျှောက်လဲချက်ကို လေ့လာကြည့်ရင် ပညာရှင်ပီသစွာ ဦးစွာပထမ Gambia အစိုးရရဲ့ ပြောကြားချက်အချို့ကို concede လုပ်ပြီး ထောက်ခံထား တာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ရွာတွေကိုမဖျက်ဆီးခဲ့ဘူး၊ဒုက္ခသည်တို့ကို မသတ်ဖြတ် ၊မစော်ကားခဲ့ပါဘူးလို့ မငြင်းခဲ့ပါဘူး။ စစ်သာအချို့ဟာ အထက်အမိန့်ကိုလွန်ဆန်ပြီး လူသတ်မှုများ၊စော်ကားမှုများပြုလုပ်ကောင်း ပြုလုပ်မိလိမ့်မယ်လို့ ဝန်ခံထားပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်သူများကို စစ်ခုံရုံးက Court Martial လုပ်နေပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း လျှောက်လဲတင်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအချို့ကိစ္စများကို concede လုပ်ခဲ့သော်လည်း အဓိက စွပ်စွဲချက် ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက Genocide ကျင့်သုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လှလှပပ၊သပ်သပ်ရပ်ရပ် ခိုင်ခိုင်မာမာ အထောက်အထားတွေနဲ့ ချေပခဲ့တာ တစ်ဖက်သူအားလုံးအသိပါ။
ဒီအကြောင်းရာလေးတွေ ကို Essay အဖြစ်တင်ပြလိုပါသော်လည်း Politics က လွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက် education ကို ဦးစားပေးအနေနဲ့ အခြားအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပဲ ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးက ရှုပ်တွေးလှပါတယ်။အနာဂတ်ရဲ့ခေါင်း ဆောင်လေးများ ဖြစ်သူ ကလေးငယ်များအကြောင်း ရေးသားကြရအောင်။ နှစ်သစ်ကူးမှာ အားလုံးပျော်ရွှင် ကြည်နူးနိုင်ကြပါစေ။
Are Children Today Growing up Too Fast
Are children today growing up too fast? Are parents pushing their children to do too much? Are children today too stressed to truly enjoy their childhood? These are questions experts are asking as children today seem far too busy to enjoy simply being children. Gone are the days of simply doing nothing and just sitting underatree daydreaming. Children today have activities lined up to keep them fully occupied from dawn to dusk. After school activities such as music classes and soccer ensure that children have little time to enjoy their childhood as anxious parents push their children to succeed not only academically but also in various other ways. The question then is simply this -should we allow children to be simply children or should we push them to achieve success to ensure they haveagreat future?
There can be no doubt that life today is very competitive and if we want our children to be successful in life, we must prepare them as best we can for the future. Experts agree with parents that children who are not prepared to face competition will certainly meet with failure sooner or later. However, experts do not always agree with parents on the matter of how best to prepare children for the future. Almost all experts agree that it is important for children to be children. In other words, children should be free from worry and should be allowed to experience fun and pleasure in life. Too much emphasis on academic success will surely turn children into mini-adults full of stress and worry and ensure that they fail in the game of life.
One can beachild only once in life, so it is important for children to experience the joys of childhood. They need to play with their peers often without adult supervision and certainly without being taught the right way to kickaball or the proper way to hitagolf ball. While focusing on academic success or prowess in sports or talent in art may bring about that one inamillion marvel like Tiger Woods in golf or Lebron James in Basketball, it is important to keep in mind that 99.9% of the kids are simply normal kids trying to enjoy their childhood before finding their way in life. Parents should encourage their kids to find their own path in life but must be careful not to push them too hard to succeed lest they cause them to burn out and lose interest in life.
Childhood should be free from worry and stress. Children must be allowed to go through life at their own peace and to focus on fun instead of success academic or otherwise. This is especially true today when children are learning to use the computer even before they learn to talk and many children haveacell phone of their own before they reach kindergarten. Parents must let children play simply to have fun and not so that they can learn something or lay the foundation foracareer in sports or arts. All children will come face to face with adversity one day and that is when they need to draw on the memories of childhood to stand up for themselves. Those children with happy memories of childhood to sustain
them will live through the bad days and emerge stronger than before while those children with no happy childhood memories will be bogged down by depression and failure.
There can be no doubt that many children today are being pushed too hard by their parents or by society and this can explain why many in high school are dropping out, turning to drugs or in some cases even committing suicide. If you love your kids, please allow them to be kids and let them enjoy being kids without pressuring them to succeed academically or on the field or in the music hall. let them interact with other kids their own age and let them find their way in life. Encourage them to be kids and support them in all their endeavours and above all, remind them daily that you are always there for them no matter what. A child who is allowed to develop and grow at his or her own pace and who feels loved and valued will definitely turn out to beaproductive citizen when he becomes an adult.